Ini ndakadya ndega mumba yekutandarira yemumvura muDubai uye handisati ndambonzwa kunyara - teles
Kusuwa kweRoyal: Lord Snowdon "anokurudzirwa nemari" acharasikirwa ne ...
Charles Portis, akanyora "Chokwadi Grit", anofa pamakore makumi masere nemasere - ...
Ndiani anoda bhuku kana iwe uine hove yekutarisa?
Rachel Hosie / Mukati
Ndakashanyira nzvimbo yekudyira iri pasi pemvura gourmet Ossiano muDubai, United Arab Emirates, zvichengete.
Kunyangwe ndichifarira kudya solo, ndainzwa kusagadzikana uye kunyepa kuti mumwe wangu airwara.
Menyu yacho yaive yekunyepedzera uye mitengo yacho - semadhora makumi manomwe nesaladhi - yaive yeutsinye.
Chikafu, zvisinei, chaive chinonyatsonaka - nezvakawanda zvakasununguka zvemahara - sevhisi yacho yaikonzeresa uye kuiswa kwacho kwaive chaiko chaiko.
Shanyira Insider peji remba peji kuti uwane dzimwe nyaya.
Iresitorendi yepasi pemvura Ossiano à Atlantis, Iyo Palm Hotera yacho ndeimwe yemarestaurant anozivikanwa anozivikanwa muDubai, muUnited Arab Emirates.
Asi kusiyana nemazhinji emaresitorendi anodhura kwazvo mutaundi, hapana muripo wekubhadhara.
Munguva yekushanya kwako kuDubai kwe iyo Dubai Air Show MunaNovember, ndaida kuona kuti zvaive sei kudya pasi pemvura ndisina kushandisa mari, saka ndakafunga kushanyira Ossiano.
Ini ndaive ndega, wandaiwanzo kunge ndisina mabviro, asi ndainzwa kusagadzikana uye kushushikana zvekuti ndakapedzisira ndanyepedzera kunge ndine mumwe wangu airwara uye aisakwanisa kuzviita - izvo zvandaitarisira kuve rwendo rwekuti sei ini ndisingazoite hazviite kuraira zvakanyanya.
Kunyangwe ndaingoda chete jogo, saladi nemvura, bhajeti rangu raisvika 390 dirhams, kana $ 106.
Izvo zvaiti, ndakapihwa yakawanda yakawedzerwa - vanochenesa mukanwa, matepi, chingwa - icho chandakasiya chazara kwazvo.
Panzvimbo pekutsanangura kuti ndiro ndedzipi, menyu yaOssiano inongonyora zvinhu senge "soup", "chikafu chegungwa" uye "nyama", asi kunyangwe yaive yekunyepedzera, chikafu chaicho inonaka, isinganzwisisike sevhisi uye mamiriro anoshamisa maitiro.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.insider.com/visit-underwater-restaurant-alone-awkward-ossiano-dubai-2020-2
TELES RELAY 21757 Posts 0 mashoko
Mazana evanhu akanyevera nezve coronavirus mushure mechiitiko chebhazi
Kusuwa kweRoyal: Lord Snowdon "anokurudzirwa nemari" acharasikirwa nehupfumi hwake mu ...
Charles Portis, uyo akanyora "Chokwadi Grit", anofa pamakore makumi masere nemasere - vanhu